ဒါလေး ကိုထပ်ပြီးရှင်းပြပါဦး ခင်ဗျာ.... - MYSTERY ZILLION
ဒါလေး ကိုထပ်ပြီးရှင်းပြပါဦး ခင်ဗျာ....
$_GET $_POST $_SESSION $_COOKIE $_REQUEST ဥပမာ တစ်ခုစီ နဲ့ ဘယ်လိုနေရာတွေမှာ သုံးတာလည်း လို့ ရှင်းပြပါဦး...နည်းနည်း လေး ရောနေလို့....ပုံစံ က နည်းနည်း ဆင်တော့ နားမလည် ဘူး ဖြစ်နေတယ် လုပ်ပါဦး အစ်ကို အစ်မ များ....
$_GET က form ကို သုံးပြီး variable ကို pass လုပ်တဲ့နေရာမှာ get method ကိုသုံးတဲ့အခါမှာ သုံးတယ်
$_POSt က form ကို သုံးပြီး variable ကို pass လုပ်တဲ့အခါမှာ post method ကိုသုံးတဲ့အခါမှာ သုံးတယ်
$_SESSION က variable တွေကို session နည်းနဲ့ assign လုပ်လိုက်တဲ့အခါမျာ သုံးတယ်
$_COOKIE က cookie ကို သုံးပြီး variable တွေ pass လုပ်တဲ့ အခါမှာ သုံးတယ်
$_REQUEST က ဘယ်လို အချိန်မှာဖြစ်ဖြစ်သုံးလို့ ရပါတယ်။ အပေါ်က ပြောခဲ့တဲ့ variable pass လုပ်တဲ့နည်းတွေအကုန် ဒီ $_REQUEST ထဲမှာ ပါပါတယ်။
ဥပမာတွေ နဲ့ ရှင်းဆို ရှင်းပြလို့ရပါတယ်...
တို့ ရှိပါသေးတယ်.. welcome to php ပါ.. :67:
ဒါဆိုရင် ကျေးဇူးပြုပြီး တော့ ဥပမာ လေး နဲ့ ရှင်းပြပေးပါခင်ဗျာ... နောက်ပြီး အစ်ကို အောက်မှာပြထားတဲ့ $_SERVER $_FILES $_ENV ကိုပါ ဥပမာ လေး နဲ့ ရှင်းပြပေးပါခင်ဗျာ .. ကျေးဇူး အများကြီးတင်ပါသည်...
ကျွန်တော် က PHP တော့မကျွမ်းပါဘူး။ သိသလောက်ပြောရမယ်ဆိုရင်တော့
GET နဲ့ POST နဲ့ က HTML Form တွေက Submit လုပ်လိုက်တဲ့ Variables တွေရဲ့
တန်ဖိုးကို ရယူရာမှာသုံးပါတယ်။ HTML Form က submission method မှာ
post လို့သုံးထားရင် Form ရဲ့ Object တွေက တန်ဖိုးတွေကို HTTP protocol ရဲ့
Header တွေထဲမှာထည့်ပြီး Submit လုပ်လိုက်ပါတယ်။ Server side မှာတော့
$_POST method ကိုသုံးပြီး တန်ဖိုးတွေကို ပြန်လည်ရယူရပါတယ်။
get ကိုသုံးထားရင်တော့ From ထဲက Object တန်ဖိုးတွေကို return URL ထဲမှာပဲ
အရေးမကြီးတဲ့ information တွေကို submit လုပ်ရင် Get ကိုသုံးနိုင်ပါတယ်။
Login form လိုမျိုးကျတော့ Post method ကိုသုံးပါတယ်။ မဟုတ်ရင်..
ကိုယ့် password ကြီး့က URL ထဲမှာ လာပေါ်နေမှာပေါ့။
(Firefox ရဲ့ FireBug plugin ကိုသုံးပြီး HTTP headers တွေကို ခေါ်ကြည့်ရင်
post နဲ့ ဘာတွေကို submit လုပ်တယ်ဆိုတာကိုမြင်နိုင်ပါတယ်။)
Post, Get ကိုသုံးပြီး Client Side ကနေ Server Side အတွက် variable တွေကို
Session ကတော့ Server ပေါ်မှာ အချိန်အတိုင်းအတာတစ်ခုကနေ
တစ်ခုအထိ active ဖြစ်နေတဲ့ Memory အပိုင်းတစ်ပိုင်းလို့ဆိုနိုင်ပါတယ်။
ဥပမာ။ ။ User login လုပ်လိုက်တဲ့ အခါမျိုးမှာပေါ့။ HTTP က stateless protocol
ဖြစ်တာကြောင့် User login ၀င်နေတဲ့ အချိန်မျိုးကနေ..logout လုပ်တဲ့အချိန်ထိ
ဒီ User နဲ့ပဲ ပတ်သက်တဲ့ ယာယီ သိမ်းဆည်းစရာမျိုးတွေကို သိမ်းဖို့ သုံးတာပါ။
$_SESSION ကိုသုံးပြီး ကိုယ်သိမ်းချင်တဲ့ ယာယီ information တွေကိိုသိမ်းနိုင်ပါတယ်။
အမှန်ကတော့ Session ဟာ virtual သာဖြစ်ပါတယ်။ Technology (ASP.Net, PHP, Rails) ပေါ်မူတည်ပြီး implement လုပ်ထားပုံခြင်းကွာပါတယ်။ ဒါပေမယ့် Session
ထဲမှာ variable ထည့်သုံးပုံခြင်းသဘောတရားကတူပါတယ်။ Session အတွက်
variable တန်ဖိုးကို server side မှာသာ define လုပ်နိုင်ပါတယ်။
Cookie ကတော့ Browser side မှာသုံးတဲ့ information ယာယီ သိမ်းဆည်းရာ
နေရာတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ Session လို Server Memory ထဲမှာ မသိမ်းဘဲ
Request ကတော့ Cookie, Post နဲ့ Get တို့ကို စုစည်းထားတဲ့ wrapper class
ဟုတ်ကဲ့ဗျာ အခုလို စိတ်ရှည်ရှည် နဲ့ပြောပေးတာ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗျာ..နည်းနည်းတော့ ရူပ်နေသေးတယ်. ထပ်ပြီးတော့ လေ့လာကြည့်ပါဦးမယ်..နားမလည် ရင် တော့ ထပ်ပြီးမေးပါ့မယ် ခင်ဗျာ..
$_GET,$_POST,$_REQUEST နဲ့ ဆိုင်တဲ့ အကြောင်းကို ကျွန်တော် ဒီ link လေးမှာ details ရေးထားတာ ရှိတယ်ဗျာ။ ဖတ်ကြည့်လိုက်ပါအုံး :67:
$_SESSION,$_COOKIE အကြောင်းတော့ မရှိသေးပါ။
ကို Zack ရေးထားတဲ့ ဆိုဒ်လေး ကောင်းတယ်ဗျာ..အသိတောင်နောက်ကျနေသလိုဖြစ်နေပြီ...ကျန်တာတွေ ရေးထားတာလည်း ကောင်းတယ်ဗျာ...ကျေးဇူးအရမ်းတင်ပါတယ်ဗျာ..နောက်ထပ်လည်း လေ့လာပါဦးမယ်..
Please study my e-book.